शिक्षा सुधारको योजना समेटिएको प्रतिवेदन खोइ ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
शिक्षा सुधारको योजना समेटिएको प्रतिवेदन खोइ ?
प्रकाशित मिति २९ असार २०७६, आईतवार १८:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक गरी लागू गर्ने प्रयास गरिएको छैन । सामुदायिक शिक्षा सुधार र योजनाका लागि महŒवपूर्ण मानिएको सो प्रतिवेदन गत १ माघ २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको थियो ।
तर, पाँच महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो गुपचुप राखिएको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासमेत आउन नसक्दा शिक्षा सुधारको योजना अलपत्र परेको छ । गत असारमा गठन भएको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन गुपचुप हुँदा शैक्षिक सुधारको योजना अलपत्र परेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
शिक्षा महँगिदै जाँदा नागरिक चरम आर्थिक मार र शोषणमा परिरहेका छन् । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदा अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन् । तर, पनि सरकार सरकारी विद्यालय सुधारको योजनालाई कार्यान्वयन गरेर नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा शिक्षा सेवा प्रदान गर्न बेवास्ता गर्दै आएको पाइएको हो ।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक विद्यालयको सुधार, शिक्षामा सबैको पहुँच, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षालगायतका विषय समेटिएका छन् ।
जोशी हाइड्रो पावरको साधारण शेयर आजबाट बिक्री
काठमाडौँ । जोशी हाइड्रो पावर कम्पनीले रु १४ करोड ४८ लाख ४६ हजार बराबरको साधारण शेयर (आइपिओ) आजबाट बिक्री…
हस्तमैथुनमा बढी रमाउने केटा की केटी !! जान्नुहाेस पुरा रहस्य …
काठमाडाैं । हस्तमैथुन किशोरावस्थामा हुने आम यौन व्यवहार हो । यद्धपी कतिपयमा यो व्यवहार पाको उमेरसम्म रहने गर्दछ ।…
मुलुक स्थायित्व र समृद्धिको चरणमा ः राष्ट्रपति
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुक स्थायित्व र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेकाले अब कुनै पनि बहानामा द्वन्द्वमा जान नहुने…
प्रधानन्यायाधीश जोशी अझै ६ दिन बिदा बस्ने
काठमाडौं। कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले ६दिन बिदा थप गरेका छन ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट असुइकृत भएसँगै जोशी साउन २०…
पोखरा । पोखरामा आइतबार भएको क्षेत्रीय भेलामा नेपाल प्रहरीका आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले आपराधिक समुहसँग साँठगाँठ गरे कारबाहीको भागिदार बन्नु…